Isihluthulelo sempumelelo J & S Botanics sika ubucwepheshe bethu eziphambili. Selokhu nkampani yasungulwa, siye kugcizelelwe njalo ucwaningo ezimele nokwakhiwa kwamasu amasha. Saqasha Dr. Paride kusuka Italy njengoba usosayensi bethu abakhulu wakha 5 amalungu R & D Ithimba emzungezile. Eminyakeni embalwa edlule, leli qembu isungule kweshumi imikhiqizo emisha futhi zixazululwe nezindaba eziningi lobuchwepheshe isihluthulelo nokwandisa inqubo yethu zokukhiqiza. Ngeminikelo yabo, inkampani yethu ime phandle umkhakha ekhaya nasemaveni emhlabeni. We ngumnikazi 7 patent ehlanganisa izici ezihlukahlukene ubuchwepheshe isizinda. Lezi ubuchwepheshe kusenza sikwazi ukukhiqiza izinto ezikhishwe ukuzihlambulula okuyisiko ephakeme, umsebenzi ephakeme begazi, lezi zinsalela ziyavezwa esiphansi kanye aphansi amandla ukusetshenziswa.
Ngaphezu kwalokho, J & S Botanics uye ehlome abacwaningi bethu isimo imishini art laboratory. ucwaningo centre yethu ifakwe amancane naphakathi isizinda tank, a evaporator rotary, amancane kanye naphakathi chromatography ikholomu, concentrator eyindilinga, ezincane umshini cleaner omiswe bese mini spray umbhoshongo ezomile, njll Zonke izinqubo ukukhiqizwa kufanele ihlolwe futhi evunyiwe elabhorethri phambi ekukhiqizweni kule mboni.
J & S Botanics igcina enkulu R & S Isikhwama njalo ngonyaka lapho ikhula njalo ngonyaka ngesikhathi 15% izinga. Umgomo wethu ungeze imikhiqizo ezimbili ezintsha njalo ngonyaka, futhi kanjalo, ukuqinisekisa nathi inkampani ehola ezikulesi simila isizinda umkhakha emhlabeni.